Cadaalad ay hesho Victoria: Sadex sano jir maxkamad ka hor caddeysay kufsi loo geystay - BBC News Somali
Cadaalad ay hesho Victoria: Sadex sano jir maxkamad ka hor caddeysay kufsi loo geystay
Image caption Dibadbax ka dhan ah arrintan ayaa ka dhacay dalkaas
Gabadh yar oo sadex sano jir ah, oo la sheegay in la kufsaday xilli ay dhiganeysay iskuul caruur oo ku yaala dalka Myanmar ayaa qaab muuqaal ahaan ah uga soo muuqatay maxkamaddii dhageysanesay kiiskeeda oo ku taala Magaalada Nay Pyi Taw ee dalka Burma.
Gabadhan, oo sharci ahaan aanan magaceeda la sheegi karin balse loogu yeeray Victoria, ayaa la kufsaday 16-kii bishii May, sida ay booliska sheegeen. Kacdoon dadweyne ayay dhacdadan ka abuurtay dalkas.
Arrintan waxaa loo xiray shaqaale ka shaqeynayay iskuulka oo dembigaas loo heysto.
Baaritaan dhanka dheecaanka hide-sidaha ah oo la sameeyay waxaa su'aal lagu geliyay dembiga loo heysto qaar ka mid ah eedeesanayaasha. Waxaa dadka qaar ee ka shaqeynayay iskuulkaas ay shegayaan in ninkaas uusan wax dembi ah gelin.
Booliska waxaa kale oo ay shegeen in baaritaankaas la sameeyay ka dib markii hooyada dhashay gabadha ay ku aragtay dhaawacyo soo gaaray ilmaha yar, taa oo keentay in isbitaalka la geeyo, ka dibna ay caddaatay in la kufsaday.
Darawal ka shaqeynayay iskuulka oo lagu magacaabo Aung Kyaw Myo, oo lala xiriirnayo arrintan ayaa xabsiga loo taxaabay. Ninkan ayaa mar la sii daayay, ka dib markii wax cadeyn ah lagu waayay, inkastoo hadana markale dib loo xiray.
Qareenka difaacaya ninkan ayaa BBC-da u sheegay in wax cadeyn ah aanan loo heyn eedeesanahan, waxayna dadka qaar ay aaminsan yihiin in lagu shirqoolay arrintan.
Muuqaalo ay heshay BBC-da oo lagu duubay kaamerooyinka ayaa muujinaya ninka oo iska fadhiya qol ka mid ah qolalka iskuulka.
"Suurtagal ma ahan in falkaas uu sameeyay. Dhamaanteen waxaan nahay macallimiin marwalba la joogay ardeyda", sida waxaa yiri mid ka mid ah macallimiinta.
Lahaanshaha sawirka Suplied
Image caption Arrintan ayaa waxaa loo xiray shaqaale ka shaqeynayay iskoolka
Dibabaxyo looga soo horjeedo arrintan, laguna dalbadanayo in caddaalad la marsiiyo dadkii kufsaday gabadha ayaa ka dhacay Myanmar, kuwaas oo sidoo kale walaac ka muujiyay tacaddiyada lagu la kaco caruurta.
Ma kufsi baa, haddii qof dumar ah ay nin xoogto?
"Aabahay oo kufsi joogto ah ii geysan jiray ayaan habeenkii dambe iskaga dhigay inaan dhintay"
Warbixin ay soo saartay dowladda ayaa lagu sheegay in kufsiga ka dhacay dalka Myanmar uu sare u kacay boqolkiiba 50, labadii sano ee la soo dhaafay, Sanadkii 2018-kii. Waxay sidoo kale dowladdu sheegtay in 1,528 fal dambiyeed ay ka dhaceen dalkaas, kuwaas oo ku dhawaad saddex meelood meel loo geystay caruur aad u da' yar.
Dadka u ololeeya arrimaha dumarka ayaa aaminsan in arrintan ay daaha ka rogtay walaac baahsan oo ah in uu sare u sii kacayo xadgudubyada ka dhanka ah dumarka, taas oo wali loo arko mid ceeb ah, dadka kalena aanan lala wadaagin.
Sharci cusub oo la xiriira caruurta ayaa lagu wadaa in laga hirgeliyo dalka Myanmar, kaa oo dhigeya in booliska ay baaraan dhibaatooyiinka loo geysto caruurta haddii aanan xitaa dadka ay khuseyso soo sheegin.
Dalka Myanmar oo sidoo kale loo yaqaano Burma waxaa inta badan dacwadaha dhageysta odayaal dhaqameed oo mararka qaar dumarka la kufsado ku dhiira geliya inay guursadaan isla qofkii kufsaday.
Gabadh ay eeddadeed dalbatay in kufsi iyo dil loo gaysto dal Hindiya
5 Sebtembar 2018
26 Luulyo 2019